Fitaovana mangatsiaka ho an'ny frizidera → Akanjo ho an'ny efitrano mangatsiaka • amboradara solosaina P&M
overalls vata fampangatsiahana dia akanjo natokana hiasa amin'ny toe-piainana izay midina ny mari-pana hatramin'ny -40 degre C. Ireo dia vokatra avo lenta, nozairina tamim-pitandremana, izay efa nanaporofo ny tenany tamin'ny orinasa maro. Ankasitrahana noho ny fiasan'izy ireo, nofidian'ny mpanjifa avy amin'ny firenena samihafa izy ireo. Vidina matetika miaraka kiraro ary fonon-tanana. Manoro hevitra ihany koa izahay atin`akanjo thermoactiveizay hameno tsara ny fiarovana ny vatana amin'ny hafanana ambany.
Coldstore CS-12 fivarotana mangatsiaka
Sarona fanamafisam-peo ho an'ny frizera manana taratasy fanamarinana
Ao amin'ny pm.com.pl, manolotra vata fampangatsiahana matihanina sy fonosana mangatsiaka matihanina izahay, izay miavaka amin'ny fiasa sy ny endrika ankehitriny. Ny maodely malaza indrindra dia Coldstore CS-12 miantoka ny fiarovana sy ny fiononana amin'ny asa azo antoka indrindra.
Ny akanjo ba misy akanjo iray dia misy tadiny hita taratra mba hahitana tsara kokoa.
Ity maodely ity dia manana zipera amin'ny tongony sy saron-tànana antsasaky ny fihomehezana. Mihazona ny akanjo taratasy fanamarinanaMisaotra fa azo ampiasaina amin'ny toerana izay mahatratra -40 degre Celsius ny mari-pana, miaro amin'ny hatsiaka sy ny hatsiaka. Ny maodelin'ny Coldstore CS-12 dia misy lamba ivelany vita amin'ny polyester afaka miaina miaraka amin'ny toetra maloto sy rano. Avy amin'ny andiany COLDSTROE, izahay dia manolotra ny palitao COLDSTORE CS10 sy ny pataloha COLDSTORE CS11.
Sarona fiarovana ho an'ny vata fampangatsiahana na fivarotana mangatsiaka fiarovana HI-GLO 40 hatramin'ny -83,3 ° C
Hetsika matihanina ho an'ny orinasa matihanina
Ireo maodely atolotray dia manana famaritana amin'ny antsipiriany. Ho fanampin'izany, ao amin'ny maodely Hi-Glo 40, dia nanolotra taratasy fanamarinana manamarina ny fanarahana ny fenitra UNE-EN 342: 2004 / AC: 2008. Ity maodely voalaza ity dia 340 h ny insulateur thermale, nylon no vita amin'ny ivelany, ary ny atiny vita amin'ny polyester, raha ny vozon'akanjo misy polyester volon'ondry 280 g. Afaka manamarina ny vita vita ny vokatra, ny mari-pana kasaina hatao ary ny lanjan'ny vokatra ny mpanjifa. Ny akanjo dia namboarina mba hahafahan'izy ireo mampiasa mandritra ny taona maro ary tsy manakana ny fihetsiketsehana any am-piasana araka izay tratra.
Raha misy fisalasalana, azafady mifandraisa amin'ny departemantan'ny serivisy ho anay, izay faly hanampy anao hisafidy ny akanjo mety ho an'ny vata fampangatsiahana sy fivarotana mangatsiaka. Manolotra palitao, pataloha, kiraro, fonon-tànana koa izahay.
magazay fivarotana mangatsiakamety amin'ny mari-pana ambanyakanjo ivelany amin'ny ririninafiarovana amin'ny coverall hatramin'ny - 40 degrefanamiana fiarovanafitoriana ataoverinia manontoloFitaovana mangatsiaka mangatsiakaAkanjo Hi-Glovata fampangatsiahana mangatsiakafivarotana mangatsiaka napetrakafivarotana mangatsiaka napetrakaakanjo fivarotana mangatsiakaakanjo fivarotana mangatsiakaakanjo fiarovana